ईन्टरनेटको लत जाँड रक्सीको भन्दा बढी : भट्टीमा झगडा प्राय : शुन्य ! – ebaglung.com
ईन्टरनेटको लत जाँड रक्सीको भन्दा बढी : भट्टीमा झगडा प्राय : शुन्य !
२०७५ श्रावण ९, बुधबार १२:३९	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी, साउन ९ । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा केहि वर्ष अघि सम्म तिनै समुह थिए , जो होटल रेष्टुरेण्टहरुमा साथी बनेर आउने र पिउँदै जाँदा झगडा सुरु गरेर दुश्मन बनेर जाने । दुई तिन वर्षयता वाईफाई सुविधा विनाको प्राय होटल , रेष्टुरेण्टहरु हुन छाडेका छन ।
अहिले तिनै समुहरु तिनै होटल रेष्टुरेण्टमा साँझ पर्न साथ आउँछन । मदिरा पिउनु भन्दाको हतारो आ–आफ्ना साथीहरु संग च्याटमा कुराकानी भ्याई नभ्याई देखिन्छ । सगै बसेर पिई रहेका साथीहरु विच कुराकानी शुन्य प्राय देखिन्छ । यहाँ सम्मकी पिउन लागेको मदिरा र अन्य खाने कुरा सकिएको वा मिठो–नमिठोको समेत मतलव छैन ।
च्याटको ब्यस्ततामा एउटा चिज खान्छु भन्दा अर्को चिज मुखमा राखेको समेत पाईयो । कुनै साथीले त्यही विचमा कुरा निकाल्छ । अर्को साथीले भन्छ –‘ पख न यार, एक जना संग अर्जेन्ट कुरा भई रहेको छ । ’
यसरी नै जाँड भट्टीको समय खासै आपसमा गफ नभई सकिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रविन्द्रबहादुर खड्का भन्छन–‘विज्ञान र प्रविधीमा मानिसहरु ब्यस्त छन । होटल रेष्टुरेण्टहरुमा पिउँदै गर्दा आपसमा कुराकानी कमै हुने गरे पछि कसरी झगडा होस् ? विज्ञान र प्रविधिको यो एउटा सकारात्मक पाटो हो ।’
विगतमा सदरमुकाम लगायतका केहि वजारका होटल रेष्टुरेण्टहरुमा प्राय दैनिक जसो झै झगडा, कुटपिटका घटनाहरु भई रहन्थे । प्रहरी निरीक्षक खड्काका अनुसार बाहिर बरु झै झगडाका घटना फाटफुट आउने गरेका छन तर होटल रेष्टुरेण्ट भित्र त्यस्ता घटना आजकल विरलै आउने गरेका छन ।
अहिलेको पिढीलाई ईन्टरनेटको लत बढि नै लागेकोले लागु औषद्य दुव्र्यशनी समेत कम हुँदै गएको केहि दिन अघि ५ नम्वर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वाजानिक गरेको तथ्याङकले पनि देखाएको छ ।
५ नम्वर प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी शेरबहादुर बस्नेतले भनेका छन–‘ सामाजिक सुरुक्षाका विषयमा प्रहरीको सक्रियता बढाईएको छ । लागु औषध दुव्र्यशनी न्युनिकरणका लागि प्रहरी संगठनले ब्यापक रुपमा टोलटोलमा पुगेर जनचेना मुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ , विगतका वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा त्यसको सकरात्मक परिणाम मिलेको छ ।’
उनले यसमा नागरिक समाजको समेत सक्रियता र साथ रहेको बताएका छन । प्रहरी संगठनको त्यही नीतिगत योजना अनुसार गुल्मी जिल्ला प्रहरीले पनि टोलटोलमा प्रहरी अभियान सुरु गरेको र त्यसले अपराधिक घटनामा कमी आएको गुल्मीका प्रहरी प्रवक्ता खड्काको भनाई छ ।
ईन्टर नेटको लतले पनि मानिसहरुमा झैझगडा कम भएको ५ नम्वर प्रदेश भित्रका अन्य प्रहरी अधिकारीहरु पनि स्वीकार गर्छन । कतिपय परिवारको घरमा समेत घरयासी कुराकानी भन्दा श्रीमान , श्रीमति छोरा छोरी फेसबुक च्याट र युट्युवमा बढी ब्यस्त हुने पाईएको छ । ‘काम नभए पछि हुने हो झगडा र काटामारी’ भन्ने बुढापाकाहरुको भनाई सत्य सावित हुँदैछ ।
विकासित मुलुकहरुमा सवैले रोजगारी पाएका छन र एक देखि अर्को संग वोल्ने फुर्सद छैन । उनिहरु विच के को झगडा र आन्दोलन होस् ? हाम्रो देशमा रोजगारी नपाए पनि ईन्टरनेट सुविधा क्रमिक रुपले सवैतिर पाउँदै आएका छन । जसले गर्दा झै–झगडा, कुटपिट र अलि सानोतिनो विषयमा आन्दोलन पनि कम हुँदै जाने हो कि भन्ने देखिएको छ ।
बिहुँ र निसीमा पहिरो गएको स्थानबाट तत्काल बस्ती स्थानान्तरण गर्न भूगर्भ विज्ञहरुको सुझाव !
बलेवाको प्रशिद्ध भैरवस्थान (मन्दिर)को दर्शन पछी प्रजिअ खरेलले भने, ‘बागलुङ जिल्लाको अर्को चिनारी !’